China akwa igbe akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa # 0111 rụpụta na ụlọ ọrụ | Yamazonhome
Akwa igbe akwa akwa osisi akwa akwa akwa akwa # 0111
Style ： Oge a
Aha: akwa akwa
Nọmba nlereanya: Amac-0111
Ebumnuche dị mma: Okenye
Size: 1500 / 1800mm * 2000 * 800mm
Agba: Dịka e gosiri na foto a ma ọ bụ ahaziri ya
Adabara ebe: ime, Hotel, Study
Mmalite: Weifang, China
Akụrụngwa: Osisi siri ike
Osisi akwa igbe siri ike
Ngwongwo ụlọ dị mfe, ụcha osisi na ọdịdị dị mma, enweghị usoro ọgbara ọhụrụ siri ike, enweghị ọdịdị dị egwu na nke ekwubiga okwu ókè, ka ndị mmadụ chefuo oge mgbasa ozi na enweghị ntụkwasị obi, mepụta ụlọ na-ekpo ọkụ, ma lekwasị anya na ịnụ ụtọ oge ahụike, nke ụwa na nke Nordic dị mma.
Dum osisi kpọmkwem nzukọ usoro
Nzukọ nzukọ nke nnukwu bọọdụ ahụ pụtara na ọ bụ naanị nkwụsịtụ na ọ dịghị nkwụsị na ntụziaka ogologo, nke na-eme ka ngwongwo nke ngwá ụlọ mara mma, ihe ndị siri ike, ibu dị arọ, na ikike dị mma.
North American High Ogo White Oak
Oak FAS-dị ka usoro iwu akara nke NHLA na United States. FAS-ọkwa na-ezo aka n'inye ikike ịdị ogologo ogologo ogologo, usoro ndị mara mma, na obere akara. A ọkwa osisi bụ ihe kacha mma maka ịme arịa ụlọ. Na ngwá ụlọ mere bụ ike na inogide, adịghị mfe Cracking, eyi na-eguzogide na corrosion na-eguzogide, adịghị mfe ịkpụzi.
Elu-edu pneumatic mkpara + nchekwa anya
Mkpanaka ikuku na-akwado mbadamba ụra, akwa akwa, na mpịachi na ibudata uwe adịghị arụ ọrụ, oghere na mmechi ahụ kwụsiri ike ma dị mma. Enwere ike ime akwa nke ihe ndina ya na obosara nke 85mm, nke enwere ike iji tinye obere ihe dịka ekwentị. Ọ na-eche echiche ma dịkwa mma. Enwere oghere nchekwa abụọ nwere nchekwa n'isi, nke enwere ike iji maka ọkụ abalị ma ọ bụ kwụọ ụgwọ, nke dị mma ma dịkwa mma maka ndị umengwụ.
Fine spraying nke eke agba
Standardskpụrụ ụcha siri ike karịsịa. Usoro spraying zuru oke na-emerụ ahụ mmadụ, na-enwe mmekọrịta enyi na gburugburu ebe obibi na ahụike. Ihe ohuru ohuru enweghi uto obula, ma obu uda nke osisi n'onwe ya ka ana etinye. , Ahụ ike, enweghị mmetọ.
Osisi siri ike akwa na nchekwa
Mgbe ọ fesịrị spraying anọ, agba agba ahụ na-esiwanye ike, ma na-enyekwa ihe na-egbukepụ egbukepụ na nke mara mma, na-enye ohere ịkepụta ederede, agba na ụdị nke osisi siri ike. Maka ezigbo arịa ụlọ, nkọwa bụ ntọala, na nkọwa niile bụ ngosipụta dị mma.
Ahazi nkuku imewe
Ihe ndina akwa bed bed dabara na usoro azụ ka mma iji ya, na-ebelata nrụgide gbakọtara na azụ n'oge ọrụ, ma na-eme ka ịdabere na-enye ọfụma. Isi ihe ndina ahụ emewo ka akụkụ enyi na enyi mechie ya, akụkụ ya niile na-ehicha ma na-egbu maramara, ngwaahịa ahụ dịkwa mma Meziwanye, hapụ ka ị lakpuo ụra na nchekwa.
Nnukwu ohere nchekwa + njikọ dị mma nke ngwaike
Nnukwu ohere nchekwa dị ka akwa nke abụọ n'ime ime ụlọ. E jiri ya tụnyere akwa nkịtị, akwa igbe ahụ nwere uru nke ikike ka ukwuu. Nwere ike itinye akwa dị iche iche na akwa oyi mgbe ọ masịrị gị, oghere ahụ dị mma ma chekwaa ebe obibi. Ọkpụkpụ, njikọ ngwaike dị elu, kwụsie ike ma nwee ntụkwasị obi na-enweghị ịma jijiji ma ọ bụ ịma jijiji, yana usoro ziri ezi ma sie ike.
A na-ahazi mbadamba osisi osisi siri ike
Ejiri akwa osisi pine dị elu mee akwa akwa ahụ, na bee osisi pine ahụ ozugbo ma bepụ ya na-enweghị nhazi na eserese nke abụọ. Ọ bụ ihe dị mma na gburugburu ebe obibi ma dị mma, na agba osisi na isi na-esi isi ọma. A na-edozi mbadamba akwa ọ bụla nke ọma na nke ọma, nke na-eme ka ikike iburu ya sie ike, ọ dịkwa mfe ịwụ elu ma kpọọ ya.
Nke gara aga: Gymnastics Air Mat 2m 3m 4m ọkachamara Inflatable ikuku track Yoga Sport ọgụ na mpe mpe akwa gbochie mmerụ tumbling mats 0388
Osote: N'ogbe DWF inflatable yoga ute omenala egwuregwu ikuku egwu Gymnastics Tumbling Airlọ Ikuku 0393
Isiokwu Foldable Bedside Table na Study Isiokwu Simple F ...
Nordic Modern Solid Wood Living Room Abụọ-Agba ...
Multifunctional Okuko ozuzu House Simple S ...
Mfe ime ụlọ ndina Solidor Bed Solid Wood Bed Bed Princ ...
Osisi siri ike nke ime ụlọ ụlọ TV nkwụnye ụgwọ # 0014
Mfe Solid Solid Osisi Mgbaze Sofa Nọọ # 0028
The mmetụta mgbe ịga Lanfang furnit ...
Isi okwu nke Amazons arịa ụlọ bụ R ...
Amazons Ngwá Ọrụ Ogo Akwụkwọ ikike
Mba 300 Yuanfeng Street, Shengcheng Subdistrict, Shouguang, Weifang, ShanDong Province, China
Kpọọ Anyị Ugbu a: 008613792661055